Izizathu ezili-10 zokucaphuka emva kokutsheva - unayo ISISOMBULULO! | Amadoda aQinisekileyo
Izizathu ezili-10 zokucaphuka emva kokucheba
IiVillamandos | | Chetyiwe, Ukunyamekela
Ukucheba kubalulekile kumadoda amaninzi, nangona amadoda nangakumbi ekhetha ukunxiba iindevu ezinkulu ezizisindisayo emsebenzini okruqulayo ngamanye amaxesha wokucheba yonke imihla. Ukutsheva kuhlala kuyinkqubo ekhawulezayo nelula nangona ngamanye amaxesha kungakhokelela kwiingxaki ekungekho mntu ufuna ukubakho.
Kwaye amadoda adla ngokucheba ngaphandle kokubukela izinto ezithile ezisisiseko kwaye ezenza njengesihogo esixakekisa izinto kuphela. Enye yezo ngxaki zinokubonakala emva kokutsheva yile ukucaphuka kolusu, ezinokwenzeka ngezizathu ezahlukeneyo ezinje.
Namhlanje kwaye ngeli nqaku siza kukubonisa Izizathu ezili-10 zokuba ulusu lwethu lucaphuke xa ucheba. Zili-10 nje kwezona zizathu zininzi zokuba ulusu lwethu lunokucaphuka, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo zezona zaziwayo kwaye ziphindaphindwa rhoqo. Ukuba awufuni kutsheva ube sisihogo, zama ukungaqiniseki ukuba eziphi na kwezi zizathu zenzeka mihla le xa utsheva.
1 Ukucheba okomileyo
2 Cheba ngamanzi abandayo
3 Ukucheba ngebhleyidi egugileyo
4 Ukucheba ngentsimbi erusi
5 Ukucheba ngoxinzelelo oluninzi
6 Ukukhawuleza akulunganga
7 Cheba ingqolowa
8 Ukucheba ngokunika imivumbo emininzi kwindawo enye
9 Sebenzisa emva koko utywala
10 Ukucheba ngezixhobo ezingazifanelanga iimfuno zakho
Uninzi lwamadoda luye lwacheba lomile ngamanye amaxesha, ngaphandle kokumanzisa ubuso kunye nokuthambisa, ngesiqhelo kuba siphelelwe kwaye asikhumbulanga ukuyithenga kusuku olungaphambi kwevenkile.
Ngelishwa ukutsheva okomileyo ayiyongcamango intle, nangona ekuqaleni kunokubonakala ngathi akukho siphumo. Ngaphandle kokukhetha ukuba asibumanzisi ubuso bethu, ngamanzi ashushu ukuba kunokwenzeka okanye sogwebu okanye ijeli ukuvula imingxunya yobuso bethu, xa sigqiba kucheba siza kuva ubunzima kwaye ngaphezulu kwako konke ukucaphuka okucaphukisayo.
Cheba ngamanzi abandayo
Ingabonakala isisiyatha kodwa ukucheba ngamanzi abandayo kunokubangela ukucaphuka okukhulu ulusu lwethu. Nanini na xa kunokwenzeka, kubalulekile ukuba utshebe ngamanzi ashushu njengoko oku kuvula imingxunya yolusu, kulungiselelwe ukucheba kwaye kuthintele ukucaphuka okucaphukisayo.
Ukucheba ngebhleyidi egugileyo
Sonke siyazi ukuba iisheyiphu zokucheba azibizi mali ininzi, kodwa ayisosizathu sokuba kufuneka sichebe ntsasa nganye ngebhleyidi egugileyo kwaye oku kunokubangela ukucaphuka.
Ukuba i-blade oyisebenzisayo inxibe kakhulu kwaye ayikusiki kakuhle njengoko kufanelekile, kuya kufuneka ucinge ngokutshintsha, nokuba kuya kufuneka uchithe isandla esinee-euro ezintsha. Ingcebiso yethu kukuba uvale amehlo xa uhlawula, bahlawule ngokukhawuleza kwaye ungacingi ukuba ezinye iindleko zikubize ngantoni onokucheba ngazo.
Ukucheba ngentsimbi erusi
Ukuqhubeka nento esele ixoxiwe kwicandelo elidlulileyo, kubalulekile ukuba ungachebi ngebhleyidi egugileyo kwaye kunjalo Kuya kufuneka ujonge ukuba ayinamhlwa nawaphi na amalungu ayo. Irusi engabizi xabiso ngokulula ukuba asizisebenzisi rhoqo okanye ukuba asizitshintshi amaxesha ngamaxesha, ezinokuthi zikhokelele kwiingxaki kuphela, phakathi kwazo ngokuqinisekileyo kukucaphuka kolusu lwethu.
Ukucheba ngoxinzelelo oluninzi
Ukucheba ukufaka uxinzelelo kakhulu amaxesha amaninzi kwenza ukuba ulusu lwethu lucatshukiswe, kunye nokuphazamiseka oku okukucinga. Akuqhelekanga ngamathuba ukuba sitshe ngoxinzelelo oluninzi kwaye oku kuhlala kusisiphumo sokungazi ukuba ungacheba njani, ukuba iblade inxibe kakhulu kwaye ayisikeki okanye siyicheba yomile kwaye ke kufanelekile ukufaka uxinzelelo ngakumbi ukuze iblade ihambe ngokulula kulusu lwethu.
Ukuba uqaphela ukuba ucheba ukusebenzisa uxinzelelo oluninzi, yima umzuzwana ucinge ngezizathu zokuba kutheni le nto ingenzeka kwaye ungalindi de ubuso bakho bubomvu njengetumato ukwenza izigqibo kunye namanyathelo.
Ukutsheva ngokukhawuleza akuyona into elungileyo kwaye kwelinye icala singaphelela enxebeni, ngamanye amaxesha kubaluleke kakhulu, ebusweni, kodwa nangokucaphuka okubalulekileyo esiya kuzisola ngako sakugqiba ukucheba.
Siyazi ukuba yinto ephambeneyo, kodwa ukonwabele ukucheba kwaye uyinike imizuzu eyi-15-20 ukwenza amava abe mnandi kangangoko.
Ukucheba ngokuchasene neenkozo yinto eyenziwa ngamadoda amaninzi ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, kubandakanya nokuthuthuzela, ukuthintela iindevu ukuba zingaphumi ngokukhawuleza okanye zikhangele into echaseneyo, kangangokuba intshebe iqala ukuphuma kwiindawo ezithile apho sihlalise abantu ngakumbi. Nangona kunjalo ukutsheva ngale ndlela kunokubangela ulusu olucaphukisayo.
Ukuba le yimeko yakho, zama ukucheba kwicala leenwele zakho zeendevu kwaye ungavuseleli ngokwenza ngokuchasene neenkozo ukuba awufuni ukuba nentlungu ethile okwemizuzu embalwa okanye iiyure.
Ukucheba ngokunika imivumbo emininzi kwindawo enye
Ukuhamba kwindawo enye amatyeli aliqela kunye nekhaba yinto enokusivumela ukuba sihambe kuloo ndawo ngokugqibeleleyo, kodwa kwangaxeshanye sinokubangela ukucaphuka okukhulu. Xa utsheva, zama umvumbo omnye okanye emibini ubukhulu becala indawo igqibelele kuba kungenjalo ukuba uchitha amaxesha amaninzi kwindawo enye, inokucaphuka ngokulula.
Lumka ukuba iblade inxibe kakhulu okanye irusi okoko xa uhamba kwindawo enye amaxesha amaninzi kunye nekhaba kwimeko ebuthathaka, isiphumo sinokuba buhlungu kakhulu kuwe.
Sebenzisa emva koko utywala
Enye yeempazamo ezenziwa ngamadoda amaninzi emva kokucheba kukufaka isicelo emva kotywala, engenzi nto ngaphandle kokucaphukisa ulusu lobuso bethu.
Emva nje kokuba ugqibile ukutsheva, umbono olungileyo kukusebenzisa into yokuthambisa okanye yamafutha aqholiweyo angenabo utywala, ukunqanda ukucaphuka kwaye ngakumbi ukuphelisa amava amnandi kwaye hayi ngokuchaseneyo.
Ukucheba ngezixhobo ezingazifanelanga iimfuno zakho
Nokuba ubuneminyaka ucheba iminyaka kwaye uzilolonga kakhulu ngebhleyidi, kunokuba lilize ukuba awunazo izixhobo ezifanelekileyo zokucheba ntsasa nganye. Qinisekisa ukuba unelade efanelekileyo kakhulu kwiimfuno zakho kwaye ikwimeko elungileyo, kuba kungenjalo ayizukunceda nganto ukuba uchebe amakhulu namakhulu amaxesha.
Musa ukuba yimpuku, nangona isiza kukucheba, siyazi ukuba kunzima, kwaye uzithengele ezinye iincakuba ezilungileyo zokucheba ngazo ngamava amnandi hayi intuthumbo yokwenyani, ephela ngamanxeba kunye nokucaphuka ebusweni bakho.
Njengoko besesikuxelele ngaphambili, ezi zezinye zezizathu zokuba ulusu ebusweni bakho lunokuphela lucaphukile, kodwa kusenokubakho abanye, kuxhomekeka kakhulu kwimeko yolusu lomntu ngamnye, ke lumka xa usiza ukucheba, ngoba nangona uyenzile amatyeli amaninzi ungaphela unamava amabi kwaye abuhlungu.
Ukulungele ukucheba ngaphandle kokubandezeleka okukruqulayo kulusu lwakho?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Chetyiwe » Izizathu ezili-10 zokucaphuka emva kokucheba
Indawo elungileyo endiyisebenzisileyo emva koko ndiyisebenzisa yiAloe Vera, iyandisebenzela, kunye nayo nayiphi na ikhrimu eneClagen, ezi zazisetyenziselwa umama kwaye bandishiya nobuso obugqibeleleyo ... (ewe, zibiza kakhulu ).
UAlan Cesarini Farrow sitsho
Ewe, iAloe Vera ilunge kakhulu ekuthomalaliseni ukucaphukisa kunye nokuhambisa isikhumba. Kukwacetyiswa kakhulu njenge-aftersun.
Phendula uAlan Cesarini Farrow
Ndichebile ndaza ndafumana ibhola elukhuni phantsi kwesilevu ………………… .ndinokwenza ntoni?
Ndineminyaka eli-17 ubudala kwaye xa ndicheba ndiphantse ndihlale ndicaphuka.
Ndisebenzisa i-blade blade blade, i-aetr shave williams kunye ne-williams foam.
Ucebisa ntoni ukuze ndingangabinangxaki?
A kwaye ungatsho ukuba ndichebe iintsuku ezimbini zilandelelana, ungaboni indlela ubuso bam obukhangeleka ngayo.
Ndiyathanda nokuba ndichebe kakuhle kuba ndineentloni ukubonwa ndingachetywanga, uyazi kule minyaka yonke yonke into iindleko ezintsha zokuziqhelanisa.
Enkosi ndiyathemba iimpendulo kwiposi yam enkosi.
UKUSEBENZISA I-EMRSOL EMULSION ANDIKHO UMBINISELO KANYE NDIYAZIVA AMANGALISAYO
Molo ndinengxaki ngenye imini ndacheba ndaza ndathambisa into yokuthambisa engayisebenzisi emva kokucheba, kwakamsinya emva kokucheba isilevu sam saqala ukurhawuzelela kakhulu ndazijonga esipilini kwaye isilevu sam sasibomvu kakhulu, ukuza kuthi ga ngoku Okulandelayo ubomvu buqhubekile kwaye ndinolusu olunamaxolo kwiintsuku ezi-4 kamva ubomvu buyehla kodwa ukwanda kuyaqhubeka, yintoni enokubangelwa?
Molo WONKE UMNTU, ISISOMBULULO SOKUTSHAVA YIMISRISOL EMULSION
UKUGCINWA KWAKHO NGOKUPHELELWA KUKHO, KUSIYEKA ISIKHUMBUZO SITSHAZELELE NGAPHANDLE KOKUBOMVU NOKUTHAMBA KAKHULU KUNYE NE-SMOOTH.
Ndicinga ukuba kuyahlekisa ukuba umntwana ongaphantsi konyaka ndicinga ukuba ndicheba ukucaphukisa akwenzileyo kuninzi kuba unolusu oluthambileyo kuba ulusu lweentsana alunalo ijermen yiyo ke loo nto pil yakhe Ingqondo ebuthathaka kodwa enosizi into endiyifunayo xa abantu becaphuka kwabanye abantu kulungile konke oko kuba ndilahla i-intanethi kuba i-intanethi apho ikhompyuter ibuthathaka
UMarceo T. sitsho
Molo, kulungile ukuba ufumane eli phepha, ndinolusu olomileyo kwaye andikwazi ukucheba ukuba aludluli ubuncinci iintsuku ezi-3, ngokungalindi kubangela ukucaphuka kulusu lwam, ngaba umntu unokundicebisa ngento ???
Phendula uMarceo T.
I-renzo kwakhona sitsho
Molo ndingathanda ukuba undincede okanye ndicebise ngento enokucaphukisa, ndinengxaki kudala ndisebenzisa iimveliso ezininzi kwaye ndinengxaki efanayo.Ndiyabulela ngentsebenziswano yenu ...
Ndinengxaki ngalo lonke ixesha ndicheba ihlala indibangela ukuba ndicaphukiswe kakhulu kwaye ibangela ukuba ndiqale ukufumana amaqhakuva namaqhakuva.
Ndicebisa ukuba ndenze ntoni okanye ndisebenzise ukunqanda ezi ngxaki ???
Molweni nonke, bendisoloko ndinengxaki ezininzi zokucheba, ukucaphuka ... ukudumba ... ubomvu ... ukubhabha njlnjl. Eyona nto intle kukucheba: ebusuku ngaphambi kokuba ulale, kancinci kancinci kancinci, I-blade ye-3-blade isebenza kakuhle kodwa oh yintoni inqaku lokuba phakathi kwebala kunye nebhley kukho ukwahlukana! Oko kwenza ukuba iinwele zihambe kakuhle kwaye azizukuntywila kwelinye! sesona sizathu sokwenene sazo zonke iingxaki zokucheba !! yibonise ubunyani !! kwaye emva kokucheba okuninzi ukuthambisa !! ngokubhekisele!
Molweni zihlobo zam ze-webmaster enkulu! Ndizokuxelela ngamava endibe nawo xa bendicheba kwaye ukusukela ngoko ubomi bam butshintshile.
Njengomzekelo wokuqala into ekufuneka yenziwe yinkwenkwe yakho kukuhlamba i-geta ngamanzi afudumeleyo. ilandelwe yileyo kufuneka uyifunxe ngomchamo .. ukuba uchamile. Xa usiya kwi-ñoba zama ukugcina i-pichin kwisikhongozeli ukuze ukwazi ukuyisebenzisa .. emva koko into eyenziwa yi-pichin kukudambisa i-geta .. ke xa une-geta efakwe kakuhle kwi-pichin qhubeka uye kwi-ajeitado .., rhoqo ngononophelo kwaye uxhasa ukukhula kweenwele…. Inkohliso yesi-2 (eyokuqala yayiyi-pichin)… ngoku kuza into ebalulekileyo. engazukuyenza into ikucaphukise. ungafumani amaqhakuva okanye iinwele ezingenayo .. zilunge kakhulu. into ekufuneka yenziwe yinkwenkwe yakho ilula kakhulu. Kuya kufuneka uyitsale, ewe uyitsale. mhlawumbi ngezinto eziphathekayo nge-net. oolindixesha. okanye ukucinga .. andazi. mhlawumbi ungacinga ngomhlobo. umfazi womhlobo wakho, uyabona ke.! Imfihlo kukudlula nje kwe-uasca ngobuso obucekeceke ebusweni bakho, kuba i-uasca inezinto ezintle kakhulu kulusu .. kuba le nto igxila kwizakhamzimba ezininzi .. ewe, nditsho kakuhle, ndininqwenela ukuba ndichebe kamnandi kwaye siza kudibana kwakhona xa Vuka imibuzo emininzi kunokuba ndingaphendula ngaphandle kwenyani. akukho maqhinga okanye ubuxoki. uhambe kakuhle!
I-PS: Qiniseka ukuba inkwenkwe ifumana iziqholo ezininzi emva kokucheba. Ngaphandle koko abantu bayakucinga ukuba ulidimoni lesini eliphela ebusweni!
Phendula kuJose Maria
I-Idol ... yomchamo okanye i-pee okanye i-piss ... ndiyisebenzise kootitshala bezemfundo ukutshisa izandla ukusebenza kwimivalo kunye nokufana ...
mee shave yonke indawo yesidlele kunye ne-meirritee kunye ne-mee pimples zaqala ukuphuma kulungile ukucheba kwakhona?
Incwadana ilunge kakhulu, kodwa ndingacebisa ukuba amadoda akhuthazwe ukuba athambise i-wax, iya kuba yeyona ilungileyo kuye wonke umntu, ngakumbi isizukulwana esitsha ukusukela nangona iindevu kunye nemadevu ziimpawu zobudoda, eziqhelekileyo emadodeni, ayingawo onke amadoda anayo. Ezinye zazo zibukeka zintle ngelixa ezinye zijongeka ngathi azihlekisi. Kwimeko yomncinci (Abafikisayo kunye nabantu abancinci) ukuba kujongeka kuyinto eyoyikisayo ukuba banentshebe okanye iindevu kuba oko kubenza babonakale bengahoywanga kwaye bengcolile, ikwonyusa neminyaka yabo engafanelekanga.
Iindevu kunye namadevu ziqhelekile kunxulunyaniswa namadoda aqolileyo, hayi abancinci, ke abafana ababeneewadevu zabo okanye iindevu zabo ukuze bajonge ngakumbi ulutsha.
Kuya kufuneka bazame unyango lomkhenkce kaJuveness, i-100% yefomula yendalo ye-Ice Sticks, iyanceda ngokudumba kunye nokucaphuka emva kokucheba. Ukongeza kokuqulatha i-collagen kunye ne-elastin, ingqele inezibonelelo ezininzi, jonga ulwazi oluthe kratya njenge-Juveness ice therapy okanye kwi-p. Iwebsite yeJuveness
Eyona razor ilahlekileyo bendikhe ndayisebenzisa kwaye ndiyitsho ngokuqinisekileyo yi-BIC.
Bendihlala ndisebenzisa ezinye iimveliso abathi zezona zilungileyo kwaye andizukubakhankanya kuba ababaniki igama elibi. kodwa emva kokuba ndizamile i-BIC ndiye ndaqonda ukuba ezinye iimveliso ezibiza kakhulu kwaye ekucingelwa ukuba zezona zilungileyo, ziyinyani kwaye zithengisa imveliso ekumgangatho ophantsi ukuze kufuneka sithenge oomatshini yonke imihla.
Ndandikucaphukela ukucheba kuba ubuso bam babubomvu kwaye butshisa ixesha elide
kodwa i-BIC ayindicaphukisi kwaphela, kuba inomphetho ongenasiphako kwaye ihlala iindevu ezininzi
Yizame kwaye uyakuqonda ukuba andithethi ububhanxa kwaye uthandana naba matshini njengam
Diego l. sitsho
Ndivumelana noJuan ndikwasebenzisa i-BIC kwaye kuphela komatshini ongacaphukisi ulusu lwam.
Phendula ku diego l.
Andinangxaki nangokucheba ubuso.UYAZI APHO?
UGabriel uyawola sitsho
Impendulo kuGabriel iquka
Molo, ndineminyaka engama-26, ndichebe enye i-prestobarva kwaye ndinobuso obomvu esidleleni.
UJohn Marin sitsho
Kuqhele ukwenzeka kum ngokufanayo njengabaninzi, kodwa ngamanye amacebo kunye nokusebenzisa iGallette Match 3 Turbo ingxaki iphelile, ngumatshini onika isitshebo sokucheba kwaye awucaphukisi ulusu, kulunge kakhulu sebenzisa, ngethemba kwaye uyizame 🙂
Phendula kuJohn Marín
UMichelle J. Henninger sitsho
Phendula uMichelle J. Henninger
Esi sesona sisombululo sisiso:
1) Kufuneka bachebe ngaphambi kokuba bahlambe.
2) Beka i-ALCOHOL SIMAHLA emva kokutsheva amagwebu.
3) Nxiba igwebu lokucheba ulusu olubuthathaka.
4) Linda malunga nemizuzu emi-5 ukuze iiarhente zisebenze kolusu.
5) Sebenzisa i-blade blade ye-GILLETTE MACH 3
6) Kwishawa sebenzisa isepha yokuthambisa enekhrim (ISOVE isepha yeyona ilungileyo)
Phambi kwale nkqubo kwakufuneka ndichebe yonke imihla emi-3 kuba ukucaphuka kwakukubi. Ngoku ndicheba yonke imihla.
Ndivele ndacheba ipenisi yam kunye neebhola, kwaye ngoku ziyandihlaba ebomini. yintoni endinokuyenza? Yonke into yokuba ibonakaliswe ngcono ukuba iye kwaye ibeke i-shrimp embizeni.
Iiteki zokufihla, ifashoni yezihlangu zomkhosi
Indlela yokwenza ukutshintshela kwincakuba yeklasi